Free Ringtones for iPhone X Xs X Max Android™ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ဂီတ နှင့် အသံ » Free Ringtones for iPhone X Xs X Max Android™
ဂီတ နှင့် အသံ | 7.9MB
သင်မူရင်းအိုင်ဖုန်းဖုန်းမြည်သံနှင့် Android ဖုန်းမြည်သံများကိုရှာဖွေနေဆဲလား။ ထို့နောက်ဤအခမဲ့ iTunes Ringtones Android ™အက်ပ်အတွက် app ကို install လုပ်ပါ။ ဤနေရာတွင်လူကြိုက်များသော Apple Ringtone 300 ကျော်ရှိသည်။
iPhone Music Ringtones တွင် Android ™အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အခမဲ့ iPhone ဖုန်းမြည်သံ Remix Remix ၏စုဆောင်းမှုရှိသည်။ အကန့်အသတ်မရှိသောလူကြိုက်များသောအဖွင့်ဖုန်းမြည်သံ iPhone နှင့် Android ™အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းမြည်သံအသစ်များ။
iPhone x Ringtones နှင့် iPhone7ဖုန်းမြည်သံ7မြည်သံ downloader7ခုကိုဤအက်ပ်မှ Downloader Downloader7။ သူတို့ကိုသင့်ဖုန်းမြည်သံ, သတင်းစကား, သတိပေးချက်များ, အသိပေးချက်များအနေဖြင့်၎င်းတို့အားသင်၏ဖုန်းမြည်သံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
iRingtone app တွင်ပါ0င်သည်။
iRingtone app တွင်ပါ0င်သည်။ ဤအခမဲ့ iPhone 11 ဖုန်းများကိုအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည် iPhone Android ™™ app ။ အကယ်. သင်သည်မတူညီသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေပါကဖုန်းမြည်သံ7ခုကိုရှာဖွေနေပါက iPhone Remix သံစဉ်များနှင့်ဟိသ်သံဟိန္ဒူဖုန်းမြည်သံများနှင့်တေးဂီတသံဟိန္ဒူမြို့သံစဉ်များနှင့်တေးဂီတသံဟိန္ဒူဖုန်းမြည်သံများနှင့်ပါ0င်သည်။ > 1 - ပုံမှန် Ringtone / Custom Contact Ringtone / Nottone / Nottone / Nottone Music Music ကိုရွေးချယ်ပါ။
2 - သင်အကြိုက်ဆုံး Android Ringtone ကိုရွေးချယ်ပါ, သင်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်ဖုန်းမြည်သံအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
4 - အခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင် irringtones များကိုအခြားသို့တင်ပါ။5- သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်. သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်. သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုနှစ်သက်ပါ အခမဲ့ဖုန်းမြည်သံ downloader defiander သူတို့ကထိတ်လန့်ကြလိမ့်မည်။
ခွင့်ပြုချက် "Read_Contact" & "Read_Contact" & "True Contact" & "True Contact" နှင့် "Read tract's ား, BR> မှတ်မိသေးအမှတ်စဉ်ဒေတာကိုမသန့်ရှင်းပါနှင့်သို့မဟုတ်ဤ app ကို uninstall လုပ်ပါ, သင်သွားမည့်သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောဗူးများ။
iPhone - iPhone သည် Apple ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး Apple နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
- ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏စာရေးသူသည်ဤအက်ပ်ရှိအကြောင်းအရာနှင့်အသံကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ - မည်သည့်မေးခွန်းများအတွက်မဆိုသို့မဟုတ်လိုင်စင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွက်မည်သည့်မေးခွန်းများအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပေါ်တွင်ကြင်နာစွာဆက်သွယ်ပါ iPhone X XS XS MAXROID ™အက်ပ်အတွက်ဖုန်းမြည်သံများ။
ဘာထူးသလဲ Free Ringtones for iPhone X Xs X Max Android™